ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ | Y-Max Technologies Co.,Ltd
1. SQA HND : Advanced Diploma in Computing
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်တွင် အကြီးမားဆုံးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိသော SQA (UK) အဖွဲ့အစည်းမှ တိုက်ရိုက် ပေးအပ် ချီးမြှင့်မည့် Higher National Diploma (HND) Computing ကိုရယူပြီး အောင်မြင်တဲ့ IT ပညာရှင်အဖြစ် သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်နဲ့ အိမ်မက်တွေကို YMC မှာတက်ရောက်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါပြီ။
Y-MAX College (YMC) သည် စည်းစနစ်ကျသော ကျောင်းစည်းကမ်းများနှင့် စာသင်ကြားရေးပိုင်းတွင် UK စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ပြည့်မှီမှုတို့ကြောင့် ကျောင်းသား/သူများ ၊ မိဘအုပ်ထိန်း သူများ၏ ယုံကြည်စွာ ရွေးချယ်မှု ကို ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
HND : Advanced Diploma in Computing (Networking) UK Diploma သင်တန်းကို Y-MAX College တွင် (၂) နှစ် တက်ရောက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂) နှစ် သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက SQA နှင့် ချိတ်ဆက်ထား သော UK အပါအ၀င် သြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဟောင်ကောင်၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန် ၊ စင်္ကာပူ ၊ ထိုင်း ၊ မလေးရှား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေမှာ နောက်ဆုံးနှစ် (၁)နှစ် တက်ရောက်ပြီး B.Sc (Hons:) Computer Science ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်သလို ပြည်တွင်း မှာလည်း ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် Y-MAX College (YMC) မှာပဲ တက်ရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
ယခု Advanced Diploma သင်တန်းသည် UK အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ကြီးများ၏ ဒုတိယနှစ် နှင့်တူညီပါသည်။
ဘယ်လို လူတွေ တက်ရောက်သင့်လဲ?
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (သို့မဟုတ်) IGCSE / GCE 'O' Level အောင်မြင်ထားသူများ၊ (မအောင်မြင်သူများအတွက်လည်း တစ်ခြား လမ်းကြောင်း အစီအစဉ်များ ရှိပါသည်။)
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(CU)၊ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်(TU)မှ ကျောင်းသား/သူများ၊
Hardware / Networking ပိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူများ
IT/Networking အပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊
တစ်ခြား မည်သည့် Major နှင့်မဆို တက္ကသိုလ် Day/Distance တက်ရောက်နေသူများ အားလုံး တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
Day Mon, Tue, Thu, Fri (4 Days per week)
Class Time 09:00 AM to 02:00 PM
သင်ကြား ရမည့် ဘာသာရပ်များ
Office Software and Applications ( Ms Word, Excel, Powerpoint, Email and Internet )
General English (4) Skills
Personal Development Skills ( IQ, EQ, SQ, CQ )
(b) Year -1
Developing Software : Introduction
SQA Advanced Diploma in Computing : Graded Unit 1 Exam
Microsoft Certified Solution Associate ( MCSA )
MikroTik Certified Network Associate ( MTCNA )
Certified Wireless Technology Specialist ( CWTS )
(c) Year -2
Computer Networking : Practical
SQA Advanced Diploma in Computing : Networking Graded Unit2( project )
2. Bachelor of Computer Science ( Hons ) in Network Technology and Cybersecurity
Y-Max College ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံ Lincoln University College နှင့်ပူးပေါင်းပြီး B.Sc ( Hons ) in Network Technology and Cybersecurity ဘွဲ့ ဒီဂရီ အတန်းကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကောလိပ် Facilitates အပြည့်အဝဖြင့် သင်ကြားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Network Operating System, Network Management နှင့် Network Implementation အပိုင်းတွေ မှာ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ် သင်ကြားမှု ပုံစံဖြင့် လေ့ကျင့် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာနေတဲ့ နည်းပညာ ခေတ်ကြီးမှာ လူတွေနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကြား ကွန်ပျူတာစနစ် နှင့် နက်ဝက်ချိတ်ဆက်မှု ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ပိုမိုတွင်ကျယ် လျှင်မြန် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေ လစ်လပ် လိုအပ်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
ယခု ဒီဂရီ ဘာသာရပ်ဟာ နည်းပညာ၊ စိတ်ချ လုံခြုံမှုစနစ်၊ ချိတ်ဆက်နိုင်မှု ကွန်ယက်များ စသည့် နည်းပညာရပ်များကို အသက်သွင်း ပေးမည့် ဘာသာရပ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များစွာ ရနိုင်မည့် ဘွဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေး နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ နှင့်သက်ဆိုင်သော ကွန်ပျူတာစနစ် များတွင် Installation, Operation, Security and Maintenance အပိုင်းများကို အဓိက သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အမှန်တကယ် တတ်မြောက်ရန် လိုအပ်သည့် essential skill for designing, implementing and managing systems စသည့် တို့ကို သင်ယူနိုင်ရန် လိုအပ်သည့် Sever နှင့် Lab Facilities များကို Y-Max College မှာ တပ်ဆင် တည်ဆောက် ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘွဲ့ရပြီးသူတွေအနေနဲ့ အဓိက အရည်အချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Network တစ်ခုကို ထိန်းချုပ်တတ်ဖို့နဲ့ အဆိုပါ Network ရဲ့လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ စသည့် Skills တွေကို တတ်မြောက် နားလည်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဘာသာရပ်ဟာ Specialist Security Techniques တွေ နဲ့ Computer Networking လုံခြုံရေးစနစ်တွေမှာ သုံးစွဲနေကြတဲ့ Real-World Networking Equipments တွေအကြောင်းကို ဂဃနဏ သင်ယူကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Market-Leading Cisco Routing & Switching Techniques တွေ၊ Security Appliances တွေ၊ Ethical Hacking Techniques တွေ၊ Vulnerability Analysis အပြင် Penetration Testing နဲ့ Data Encryption Technology တို့ကို လည်းသင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HND ( သို့ ) Advanced Diploma Computing နှင့် IT and networking related ဘာသာရပ်ဖြင့် ၂ နှစ် အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာ ရရှိအောင်မြင်ပြီးသူများ
TU နှင့် CU တို့မှ Computer Networking အပိုင်းဖြင့် တတိယနှစ် အထိ အောင်မြင်ထားသူများ
IT နှင့် Networking ဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ များရရှိထားပြီး အဝေးသင်ဖြစ်စေ၊ Day ဖြစ်စေ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားသူများ တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
Final Year ( Top Up ) Bachelor Degree တွင် သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်များ
Inter Routing Technology
ဘွဲ့ရထားပြီး သူတွေ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ
I.T. Support Engineerစသည်ဖြင့် Network Security Professional အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
3. SQA HND : Advanced Diploma in Business
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်တွင် အကြီးမားဆုံးနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိသော SQA (UK) အဖွဲ့အစည်းမှ တိုက်ရိုက် ပေးအပ် ချီးမြှင့်မည့် Advanced Diploma in Business ကိုရယူပြီး အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး ပညာရှင်အဖြစ် သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်နဲ့ အိမ်မက်တွေကို YMC မှာတက်ရောက်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါပြီ။
HND : Advanced Diploma in Business UK Diploma သင်တန်းကို Y-MAX College တွင် (၂) နှစ် တက်ရောက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂) နှစ် သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက SQA နှင့် ချိတ်ဆက်ထား သော UK အပါအ၀င် သြစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဟောင်ကောင်၊ နယူးဇီလန်၊ အမေရိကန် ၊ စင်္ကာပူ ၊ ထိုင်း ၊ မလေးရှား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေမှာ နောက်ဆုံးနှစ် (၁)နှစ် တက်ရောက်ပြီး BBA, BBM ဘွဲ့ကိုရယူနိုင်သလို ပြည်တွင်း မှာလည်း ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့်Bachelor of Business Administration ( BBA ) ဘွဲ့ကို Final Year ( Top up ) Degree အနေဖြင့် Y-MAX College (YMC) မှာပဲ တက်ရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း(သို့မဟုတ်) IGCSE / GCE 'O' Level ဖြေဆိုထားသူများ၊(မအောင်မြင်သူများ အတွက်လည်းတစ်ခြား လမ်းကြောင်းအစီအစဉ်များရှိပါသည်။)
International Companies ကြီးများ၊Organizations ကြီးများတွင်ရာထူးမြင့် ၊လစာမြင့်စီမံခန့်ခွဲ မှုအပိုင်းဖြင့်Career life ကိုဦးတည်လုပ်ကိုင်လိုသူများတက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Day	 Mon, Tue, Thu, Fri (4 Days per week)
Class Time	 09:00 AM to 02:00 PM
+ Office Software and Applications ( MS Word, Excel, Power Point, Email , Internet )
+ General English (4) Skills
+ Personal Development Skills ( IQ, EQ, PQ, SQ, CQ )
+ Essential of Business Management
+ Managing People and Organizations
+ Marketing : An Introduction
+ Information Technology : Applications
+ Economics Issues : An Introduction
+ Communication : Business Communication
+ Human Resource Management : Introduction
+ CreatingaCulture of Customer Care
+ Business Law : An Introduction
+ IT and Business : Spreadsheets
+ Economics 1 Micro and Macro Theory and Application
+ Personal Development Planning
Business : Graded Unit 1
+ Entrepreneurship Management
+ Leadership Management
+ Business Plan Writing
+ Marketing Plan Writing
(c) Second Year
+ Business Culture and Strategy
+ Behavioral Skills for Business
+ Business Contractual Relationships
+ International Marketing : An Introduction
+ Business : Graded Unit 2
+ Economics2: The World Economy
+ Preparing Financial Forecasts
+ Continuous Workforce Development
+ Statistics for Business
4. Bachelor (Hons) in Business Administration
Y-Max College ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံ Lincoln University College နှင့်ပူးပေါင်းပြီး Bachelor ( Hons ) in Business Administration ဘွဲ့ ဒီဂရီ အတန်းကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကောလိပ် Facilitates အပြည့်အဝဖြင့် သင်ကြားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sociology, Company Law, Logistics and Supply Chain Management, Business Ethics, Event Management နှင့် Retail Management စသည့် အပိုင်းတွေ မှာ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ ပေါင်းစပ် သင်ကြားမှု ပုံစံဖြင့် လေ့ကျင့် သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာနေတဲ့ယနေ့ ခေတ်ကြီးမှာ အရင်လို သာမန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို သမရိုးကျ လုပ်နေလို့မရတော့ပဲ ဆန်းသစ်တဲ့ အိုင်ဒီင်္ယာတွေ၊ နည်းစနစ်တွေ၊ ဈေးကွက် ထိုးဖောက်မှု ပုံစံတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှသာ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု အနေဖြင့် ရည်ရှည် ရပ်တည်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ဒီဂရီ ဘာသာရပ်ဟာ အသစ် အသစ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ မှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ အသိပညာတွေကို စနစ်တကျသင်ယူရမည့် ဘာသာရပ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များစွာ ရနိုင်မည့် ဘွဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကြားရေးအပိုင်းမှာလည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို Case Studies များ၊ Scenario များချပေးကာ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် Critical Thinking Skills နှင့် Innovation Skills များကို တပါတည်း ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
HND ( သို့ ) Advanced Diploma Business related ဘာသာရပ်ဖြင့် ၂ နှစ် အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာ ရရှိအောင်မြင်ပြီးသူများ
စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ Business ( or ) Commence (or ) Management ( or ) Accounting ( or ) Economics အပိုင်းဖြင့် တတိယနှစ် အထိ အောင်မြင်ထားသူများ
Business ဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာ များရရှိထားပြီး အဝေးသင်ဖြစ်စေ၊ Day ဖြစ်စေ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိထားသူများ တက်ရောက် နိုင်ပါသည်။
+ Logistics and Supply Chain Management ( LSCM )
+ Retail Management ( RM )
+ Innovation Management for Global Competitiveness
+ Multinational Enterprise
+ Target Economics Regions